Azonao atao izao ny mamaky kapila amin'ny endrika APFS noho ny fampiharana Retrofit Kit | Avy amin'ny mac aho
Ny iray amin'ireo olana azontsika hananana rehefa manana ny iray amin'ireo Mac misy kapila fahatsiarovana amin'ny endrika APFS isika dia ny tsy fitovizan'ireo kapila misy kapila ireo amin'ny endrika taloha.
Izany hoe, mety hitranga ny sehatry ny asa ataonao dia mampiasa kapila APFS, miaraka amin'ny macOS High Sierra, saingy tonga tany ianao nefa tsy tsapanao fa ny Mac anao hafa na Mac mpiara-miasa aminao dia tsy manana na tsy afaka manavao ny endrika APFS. Raha izany no izy, Kit Retrofit dia mamela anao hamaky kapila endrika APFS rehefa miasa ao amin'ny HFS + ianao.
Ankehitriny, ireo tovolahy avy amin'ny Paragon Software, orinasa iray manam-pahaizana manokana amin'ny vavahady eo anelanelan'ny rafitry ny rakitra, dia namoaka kit izay mamela ny APFS hamaky amin'ireto rafitra fiasa manaraka ireto: 10.10 Yosemite, 10.11 Capitan ary 10.12 Sierra. ny marary mitsika amin'ireo rindrambaiko afaka ataontsika amin'ny rohy manaraka.
Aorian'ny fametrahana ny Kit, dia azo vakiana tsara ireo boky ao amin'ny APFS. Ankoatr'izay, afaka manao asa isan'andro maro kokoa isika: mitady ny fisie ilaina, manokatra azy ireo toy ny hoe ao anaty rafitra misy io rakitra io na koa mamindra azy ireo any amin'ny Mac hafa. Amin'ny ankapobeny, afaka manao asa isan'andro isika noho ny Kitapo famerenana.
Na izany aza mbola ny rindrambaiko dia tsy mamela ny fanovana ireo rakitra ireo, amin'izao fotoana izao dia vakiana fotsiny. Nilaza ny hevitr'izy ireo fa miasa izy ireo. Amin'ity fanavaozana ny fanovana rakitra ity dia tokony ho tonga ny fahafahan'ny endrika format amin'ny endrika hafa ary ny fanamarinana ny atiny.
Amin'ny lafiny iray na amin'ny fomba hafa, ny rindrambaiko manana ireo toetra ireo dia mihoatra ny ilaina. Tadidio fa ny ankamaroan'ny iMac dia manohy miasa miaraka amin'ny Fusion Drive (hybrid eo amin'ny drive mekanika sy ny SSD) ary izay holazaina momba ny Mac mini, izay mitohy amin'ny drive mekanika (raha tsy hoe nanavao ny Mac ny tompony). Fa kosa, ny solosaina finday Mac rehetra eny an-tsena dia mampiasa SSDs. Marina fa rehefa mamindra ny fampahalalana eo anelanelan'ny Mac iray mankany amin'ny iray hafa, miasa miaraka amin'ny iCloud Drive na serivisy rahona hafa, dia manafaingana be ny dingana izany, fa raha te-hamaky ny atiny ianao toy ny efa natao hatreto, miaraka amin'ny fisie ankehitriny rafitra avy any Apple, tsy mora izany. Raha izany no anao dia ilaina tokoa ity rindranasa ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Afaka mamaky kapila amin'ny endrika APFS ianao izao noho ny fampiharana Kit Retrofit maimaim-poana